Ny tsakitsaky voalanjalanja indrindra azo sitrana amin'ny fiofanana | Nutri Diet
Ankoatra ny fialantsasatra tsara amin'ny alina, mba hahafahan'ny vatana sitrana amin'ny fiofanana ary ho tsara toy ny vaovao ny ampitso mila manampy azy amin'ny tsakitsaky salama ianao aorian'ny fikelezana aina.
Ireto hevitra manaraka ireto dia fomba matsiro sy ambany kaloria hahazoana ny proteinina sy ny gliosida ilainao ho an'ny famerenana amin'ny laoniny ny hozatra aorian'ny fanaovana fanatanjahan-tena ara-batana.
1 Yaorta grika misy voankazo
2 Cheese sy bisikileta
3 Hanozongozona ny proteinina
Yaorta grika misy voankazo
Aorian'ny fiofanana, mila hozatra ny hozatra raha te ho sitrana. Ary izany indrindra no omen'ny yaourt grika. Raha te hihinana sakafo maivana aorian'ny fampiofanana, dia ampio loharano misy gliosida, toy ny voankazo voankazo vaovao. Azonao afangaro ao anaty vilia ny rehetra mba hihinana azy mora kokoa.
Cheese sy bisikileta
Na dia ampiasaina amin'ny fety sy fivoriambe aza izy io, io sakafo maivana io koa dia hevitra tsara hanarenana ny fiofanana. Ary ny fromazy dia manome proteinina sy kalsioma, raha ny cookies kosa dia manome gliosida sy fibre sarotra. Mba tsy hanimba ny asa mafy amin'ny gym, miloka amin'ny fromazy malefaka ambany kaloria ary mameno ny mofom-bary.
Hanozongozona ny proteinina
Ireo zava-pisotro ireo dia mameno ireo magazay angovo aorian'ny fikolokoloana mafy, indrindra ireo izay misy fifandanjana tsara eo amin'ny proteinina sy ny gliosidrat. Ny tombony azony noho ny snacks hafa dia ny hafainganana. Raha manam-potoana kely aorian'ny fampiofanana ianao dia ny shakes proteinina no safidy tsara indrindra, hatrizay azonao atao ny manomana azy ireo mialoha ary mitondra azy ireo mora eny an-dalana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » fahasalamana » Sakafo ara-pahasalamana telo mahasalama amin'ny laoniny